एक क्रुर श्रीमान्, जसले श्रीमतीकै ज्यान लिन छ्यापे एसिड | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर समाचार राष्ट्रिय समाचार एक क्रुर श्रीमान्, जसले श्रीमतीकै ज्यान लिन छ्यापे एसिड
एक क्रुर श्रीमान्, जसले श्रीमतीकै ज्यान लिन छ्यापे एसिड
३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०७:३५
कुनै बेलाको असीम प्रेम घृणामा बदलिँदा श्रीमान् प्रहरीको हिरासत र श्रीमती अस्पतालको शैयामा पुगेका छन् । सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएका दम्पक्तिको यो वियोगान्त कथा चलचित्रको ‘प्लट’जस्तै छ । र, यस्ता घटना हुनुको कारण पनि चलचित्र नै हुनुपर्छ ।
एसिड आक्रमणका घटना बढ्नुलाई धेरैले कमजोर कानूनलाई दोष दिँदै आएका थिए । तर, कडा कानून बन्दा पनि यस्ता घटना घटेका छैनन् । प्रतिसोधले बढाउने अपराधिक मानसिकता र सजिलै एसिड किन्न पाउने अवस्थाले यस्ता घटना बढाइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । बुधवार कालोपुलमा एसिड प्रहार गर्ने विष्णुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । र, अभियुक्तले प्रतिशोधकै कारण एसिड प्रहार गरेको स्वीकारेका छन् ।
अग्नि हिंसा पीडित नेपालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०१० देखि हालसम्म एसिड प्रकरणका झण्डै चालीस वटा घटना भएका छन् । र, तिनका मूल कारण हुन्– रिसिइबी, दाइजो, पारिवारिक कलह, प्रेम, विवाह र यौन प्रस्ताव अस्वीकार । जहाँ, जसले पनि एसिड किन्न पाउने भएकाले पनि विकृतिजन्य सोचलाई बढुवा पुगिरहेको छ ।
जतिबेला पनि एसिड हान्न सक्ने अवस्थाले अपराधी मनोवृत्तिलाई त प्रोत्साहित गरेकै छ । साथमा एसिड नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बहसलाई पनि बढाएको छ । तराईमा आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले २०७५ असोज ताका अनुमति प्राप्तलाई मात्रै विक्रि गर्ने व्यवस्थाम मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, काठमाडौंमै बढेका घटनालाई हेर्दा यो तराई क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भन्ने ठान्ने मुर्खता गर्नु हुँदैन ।
एसिडका कारण महिलामाथि हिंसा बढेकाले खरिद बिक्रीको उचित नियमन तथा अनुगमन गर्न आत्यावश्यक भइसकेको छ । एसिडजस्तो संवेदनशिल बस्तुको बढ्दो दुरुपयोगले हिंसाजन्य अपराध बढाएकाले उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति, खरिद, बिक्रिको नियमनका लागि सम्वन्धीत सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी आवश्यक कानूनी तथा नियमनकारी मापदण्डको प्रबन्ध गरी लागु गर्न र बिक्री वितरण नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका बनाई लागु गर्न, समय समयमा बजार अनुगमन गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमै परमादेश जारी गरेको थियो ।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले कानूनी प्रबन्ध गरेपनि बजार नियन्त्रणको प्रभावकारी नीति भने बनाइएको छैन । जसकारण यस्ता घटना निरन्तर बढिरहेका छन् । news24nepal.tv
होसियार ! बुढेसकालको अनुहार हेर्ने ‘फेसएप’ चलाउदा पछुताउनु पर्ला है !
सिद्धार्थ राजमार्गमा राखिएको ५ वटा बुद्धका मूर्ति तोडफोड
१ करोडको जीवन बीमा, १० लाखकाे कन्ट्र्याक्ट किलर, सखाप पारियाे श्रीमतीलाई